Nyefee Music site na kọmputa na-iPad na na-enweghị iTunes
"Olee otú m nyefee music si m PC m iPad Obere? M a newbie ebe a. Biko, nyere." Ihu ọma, e nwere abụọ azịza ajụjụ a: nyefee music site na kọmputa na-iPad-enweghị na iTunes. Ebe a na-esonụ, ha abụọ ga-ekpuchi:
Part 1. Download Music site na kọmputa na-iPad enweghị iTunes
Part 2. Nyefee Music site na kọmputa na-iPad na iTunes
A Mac ma ọ bụ PC na iTunes arụnyere
Your iPad na ya eriri USB
Wondershare TunesGo - Download Songs site na kọmputa na-iPad
Nyefee ọ bụla song site na kọmputa gị na-iPad n'ime a abụọ;
Tọghata iPad kedi songs ka iPad enyi na enyi formats;
Detuo ha niile ma ọ bụ họrọ songs si gị iPad ọ bụla kọmputa;
Nkwado iPad ikuku, iPad Obere, ọhụrụ iPad, na ndị ọzọ iPad ụdị na-agba ọsọ iOS 8/7/6/5.
Nzọụkwụ 1. gbanyụọ iPad Automatic syncing na iTunes
Ẹkedori gị iTunes Library na kọmputa gị. Pịa Dezie menu ma họrọ Mmasị. Na popped elu Devices Mmasị window, pịa Devices. Ego nhọrọ Prevent iPods, iPhones, na iPads si syncing na-akpaghị aka. Nke a nzọụkwụ dị oké mkpa. Site n'ime nke a, iTunes agaghị eji dochie ọdịnaya na gị iPad na ọdịnaya site n'onwe ya.
Nzọụkwụ 2. Run Wondershare TunesGo na gị Kọmputa
Ọ bụrụ na ị wụnye Wondershare TunesGo na kọmputa gị, biko pịa bọtịnụ n'okpuru ibudata ya. Wee jiri eriri USB jikọọ gị iPad gị na kọmputa. Run Wondershare TunesGo na ị ga-ahụ gị iPad egosi na isi window.
Nzọụkwụ 3. Download Songs site na kọmputa na-iPad
Pịa na Nyefee Music, tinye Nyefee Music peeji mgbe ngwaọrụ jikọọ. Mgbe ahụ, pịa Import ime n'af abụọ ọzọ nhọrọ: Import si iTunes / Import si PC / Mac, họrọ mbubata si PC / Mac. Mgbe ị na-egosi niile nyefee music faịlụ na windo File Explorer, nne Mmetụta ndị ị chọrọ nyefee na pịa OK. E ọ na-aga.
Mara. Tọghata music format aoutomaticlly
iTunes na Apple ngwaọrụ (iPhone / iPad / iPad Obere / iPod wdg) adịghị akwado niile music formats, Formats na iTunes-akwado na-; MP3, AAC, M4A, WAV, M4R, M4B, AIFF na AIF, nke ị nwere ike ozugbo idetuo ha ka ha iTunes.
N'ihi na ụfọdụ formats na iTunes anaghị akwado, Wondershare TunesGo ga-tọghata music usoro mp3 aoutomaticlly.
Uru site agbakwụnye Music site na kọmputa na-iPad enweghị iTunes
Download music ọ bụla na kọmputa ọ bụla iPad;
Ọ dịghị erasing data nke ga-eme gị iPad;
Ekekọrịta music n'etiti na kọmputa na iPad kpamkpam;
Nnọọ mfe idetuo music site na kọmputa na-iPad;
Ihe ị chọrọ
A PC ma ọ bụ Mac
Your iPad eriri USB
Ọ bụrụ na ị wụnye iTunes ma na kọmputa gị, ụtọ download iTunes na wụnye ya na kọmputa gị. Ẹkedori ya. Na isi window nke iTunes, pịa View menu ma họrọ Gosi sidebar.
Pịa File menu on iTunes Ohere ma họrọ Tinye File ka Library ma ọ bụ Tinye nchekwa Library. Na mgbe ahụ na-agagharị na kọmputa gị maka songs. Họrọ chọrọ songs na mbubata ha gị iTunes Library.
Jikọọ gị iPad gị na kọmputa site na iPad eriri USB. Na mgbe ahụ ị ga-ahụ gị iPad egosi na ekpe sidebar, nri n'okpuru NGWAỌRỤ.
Pịa gị iPad mbụ. Na mgbe ahụ i kwesịrị pịa Music taabụ na nri window. Ego mmekọrịta Music na họrọ Niile music n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ họrọ listi ọkpụkpọ, nka, albums, na Genres. Wee pịa Mee na ala nke ahụ na windo.
Iji iTunes nyefee music site na kọmputa na-iPad dị mfe. Ọ bụ ukara na kasị n'ọtụtụ ebe na ngwá ọrụ ibudata music site na kọmputa na-iPad. Otú ọ dị, n'ihu na-eji ya, ị ga na-amị iwu n'uche: 1. kọmputa gị na nke gị iTunes na-ga-paired na gị iPad. Ma, iTunes ga-akwụsị gị iPad data mgbe na-agbakwụnye music site na kọmputa gị ka gị na iPad. Ọ pụtara: adịghị ịgbanwee kọmputa, adịghị mmekọrịta gị iPad na ndị ọzọ ndị mmadụ kọmputa, adịghị snap songs na na Internet site na gị iPad, wdg Ma ọ bụ ị ga-ata ahụhụ site na data ọnwụ.
Otú nyefee Photos si iPad ka iPad
Olee otú mbubata PPT ma ọ bụ keynote faịlụ gị iPad (Mountain odum gụnyere)
Otú nyefee Video si gam akporo ka iPad
Otú nyefee Photos si gam akporo ka iPad
iPad Nọgidesiri na mgbake mode mgbe Update - Idozi Ọ
Olee otú iyi Movies ka iPad na Enweghị Loss
> Resource> iPad> Nyefee Music site na kọmputa na-iPad / iPad Obere na na-enweghị iTunes